Ny soavaly lehibe indrindra eto an-tany | Soavaly Noti
Monica sanchez | | ny hafa
Ny soavaly dia iray amin'ireo biby tsara tarehy indrindra misy. Ny fahaizany, ny heriny, ny fomba hazakaza-jaza mahafinaritra azy, ary maninona raha lazaina izany? Ny fahatsapana fahalalahana izay ampitainy amintsika rehefa mandeha mitsangatsangana any ambanivohitra na amoron-dranomasina isika.
Ny fahitana azy ireo dia fifaliana foana, satria izy ireo dia manana fahaiza-manao hafahafa mamindra antsika amin'ny tontolo hafa tanteraka amin'ilay nahazatra antsika, ho any amin'ny toerana iarahan'ny natiora sy ny olombelona indrindra afaka mankafy ny fotoana feno. Raha ny mitaingina ny iray no nofinofisin'ny maro, Azonao an-tsaina ve ny manao izany amin'ny soavaly lehibe indrindra eto an-tany?
1 Poe, soavaly lehibe indrindra eto an-tany
2 Soavaly goavambe izay tsy ao amin'ny Guinness Book of Records
3 Karazan-tsoavaly lehibe
Poe, soavaly lehibe indrindra eto an-tany
Rehefa mieritreritra soavaly isika dia mora ny maka sary an-tsaina ny biby manamboninahitra, manana haavo 1,50 na 1,80, fa i Poe kosa mamaky ny firaketana rehetra: Miaraka amin'ny haavon'ny 3 metatra sy ny lanjany mihoatra ny 1 taonina, dia fantatra amin'ny anarana hoe Equine lehibe indrindra eto an-tany. An'ny fianakavian'i Clydesdale, fiaviana Scottish, dia mipetraka amin'ny toeram-pambolena kely any Ontario (Toronto, Canada) izy izao, izay karakarain'ny tompony Shereen Thompson.
Na dia androany aza dia mihinana voanjary hatramin'ny 4,5 kilao sy ahidratsy roa ary mitelina rano manodidina ny 200 litatra isan'andro izy indrisy fa tsy nanana fiainana mora na aina foana izy. Ny tompony teo aloha dia tsy afaka nanome sakafo azy satria tamin'ny krizy ara-toekarena dia nilatsaka be ny vola azony. Tsy tiany ho tonga amin'ny tanana tsy mety izany, koa dia nanao dokambarotra tamin'ny taratasy teo an-toerana izy mba hanandramana mitady olona tompon'andraikitra hikarakara azy.
Rehefa nahita ny doka i Shereen dia tsy nisalasala kely izy. Nanana izay nilainy rehetra izy mba hampifaliana ity biby tsara tarehy ity, ka nifandray avy hatrany izy. Fotoana fohy taorian'io dia nomeny anarana ilay mpanoratra tiany: Edgal Allan Poe.
Soavaly goavambe izay tsy ao amin'ny Guinness Book of Records
Na eo aza ny habeny, Poe dia mbola tsy ao amin'ny Guinness Book of Records, izay tena mahagaga. Nilaza ny tompony fa manantena ny ho avy tsy ho ela. Enga anie. Soavaly toy izany, karakaraina tsara, miaraka amin'ny palitao mamirapiratra toy izany ary toetra amam-piaraha-monina, dia mendrika ny ho ao anatin'io boky io mba hahatsiarovantsika rehetra, na ankehitriny na amin'ny ho avy.
Eo am-piandrasana, ny soavaly lehibe indrindra eto an-tany dia entina mankany amin'ny Fetiben'i Lambton izay mahataitra ireo mahita azy. Izy io, araka ny filazan'i Shereen, dia malaza be, saingy noho ny habeny zava-dehibe ny fitazonana elanelam-piarovana azo antoka satria adino ny herinao indraindray. Na dia mandeha mitsidika azy aza ianao, dia tsy mila manahy be loatra: soavaly tian'ny olona izy, ary sahala amin'ny zanak'ampondra no hitondrany azy.
Na dia i Poe aza no soavaly lehibe indrindra eto an-tany, dia tsy iray amin'ireo goavana ny taranany. Mampitovy izany, amin'ny génétique, dia mitombo ary mivoatra voajanahary amin'ny habe mahavariana, miaraka amin'i Percherons sy Shire.
Avy amin'ny faritany frantsay Le Pereche, akaikin'i Normandy, izy ireo dia mitondra ny ran'ny soavaly arabo. Ireo biby ireo afaka milanja mihoatra ny 1200kg izy ireo ary mahatratra hatramin'ny 1,96m. Manana loha mahafinaritra izy ireo, vatan-doha ary rambony lehibe sy lava ary lava be. Fohy ny tongony, saingy manana kitroka mafy be miaro azy ireo izy ireo. Ny loko mahazatra ny volon'izy ireo dia volontany na mainty, saingy afaka ahitanao azy ireo amin'ny alokaloka hafa toy ny volondavenona, jet na thrush.
Misongadina amin'ny fahamendrehany, ny hakingany ary ny hakantony izy ireo. Izy ireo dia mety amin'ny asa fambolena, ho an'ny fiompiana ary ho toy ny volon-tsoavaly, satria mahery izy ireo, matanjaka, marani-tsaina ary koa, toy ny fitoviana rehetra, mafy hatoka.
Avy any Great Britain, Iray amin'ireo karazany io, ankoatry ny maha lehibe azy, miaraka amin'ny lanjany mihoatra ny 1000kg sy ny haavony izay eo anelanelan'ny 180 santimetatra sy 2 metatra, dia iray amin'ireo tsara tarehy indrindra. Manana vatana matanjaka sy matanjaka izy, manana rafi-pitatitra mivoatra be. Betsaka ny tongotra fotsy, toy ny hoe nisy ba kiraro, izay vao mainka manampy ny hatsaran-tarehiny.
Raha misy zavatra ratsy na tsy tsara loatra ka tsy maintsy holazaintsika dia soavaly miadana izy ireo. Na izany aza, ny toetrany mirindra sy miorina tsara, ny faharetany ary ny faniriany hampifaly, manao an'io karazana io ho iray amin'ireo tena atolotra indrindra ho an'ireo izay mbola tsy nanana soavaly taloha. Izy io dia azo ampiasaina amin'ny asa fambolena ary, mazava ho azy, koa ho an'ny fampirantiana, izay azo antoka fa hahagaga ny mpitaingina anao sy ny mpitsara.
Ahoana ny hevitrao momba ny tantaran'i Poe? Efa naheno momba azy ve ianao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Soavaly noti » ny hafa » Ny soavaly lehibe indrindra eto an-tany